काँग्रेसमा फेरि ज्योतिषीको चर्चा : देउवाले भने, ‘अब म प्रधानमन्त्री’ – AB Sansar
December 27, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on काँग्रेसमा फेरि ज्योतिषीको चर्चा : देउवाले भने, ‘अब म प्रधानमन्त्री’
काठमाडाैं, १२ पुष । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धेरै अघि बुटवलका एक ज्योतिषीले ‘६ पटक प्रधानमन्त्री बन्छन्’ भनिदिएको विषय अहिले पार्टीभित्र पुनः चर्चामा छ ।
सत्ताका लागि जस्तो पनि जोखिम मौल्न सक्ने छवि बनाएका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई पनि आफ्नो लाभहानिसँग तुलना गर्न थालेको भनेर यतिबेला पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर जति आलोचना भए पनि उनी आफ्नो अडानबाट हल्लिएका छैनन् । याे खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ
कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्री पत्नी राधिकासँग यति धेरै सम्पत्ति? भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा!
May 27, 2021 May 27, 2021 Ab-संसार
‘मेरो निर्णय अदालतले उल्टाउन सक्दैन, अबको चुनावमा दुई तिहाई ल्याएर म फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु’ : केपी